Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya oo ka qeybgalay shirka QM ee Dhaqaalaha adduunka - Jowhar Somali news Leader
Home News Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya oo ka qeybgalay shirka QM ee Dhaqaalaha adduunka
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya oo ka qeybgalay shirka QM ee Dhaqaalaha adduunka
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Dr. C/raxmaan Ducaale Beyleh ayaa ka qeybgalay shir Qaramada Midoobay ee looga hadlay arrimaha dhaqalalaha adduunka kaasi oo ku qabsoomay aaladda foggaan araga ah ee khadka internet-ka.
Shirkaan ayaa looga hadlay saamaynta dhaqaale iyo bulsho ee uu dunida ku yeeshay xanuunka Safmarka ah ee Corona Fayras.
Shirkaan ayaa waxaa ka qeybgalay ku dhawaad 73 Wasiiir Maaliyadeed iyo masuuliyiinta Hey’addaha dhaqaalaha Aduunka oo Khudbad kala duwan ka jeediyay shirka.
“Waxa aan maanta ka qeybgalay shir ka Qaramada Midoobay oo ku saabsanaa caqabadaha dhaqaale ee uu sababay Covid-19. Waxa aan ka mid ahaa ku dhawaad 73 Wasiiir Maaliyadeed iyo masuuliyiinta hey’adaha dhaqaalaha Aduunka oo Khudbad ka jeediyay shrka”. Ayuu ku yiri Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya qoraal uu soo dhigay boggiisa Facebook-ga.
Cudurka safmarka ah ee Corona Fayras ama Covid-19 ayaa samayn ballaaran oo dhanka dhaqaalaha ah ku yeeshay dunida oo dhan iyadoo sidoo kale uu aad u sameeyay isku socodka adduunka ee dhanka duullimaadyada caalamiga ah iyo shaqooyinka intaba.
Soomaaliya ayaa waxaa samayn oo dhaqaale ku yeeshay xanuunka safmarka ah ee Corona Fayras si la mid ah dunida kale.